Iyo yekutanga yekuvandudza yegore yeKali Linux iri pano | Linux Vakapindwa muropa
Anogumbura Security akazivisa nhasi kuwanikwa kwe KaliLinux 2019.1, yekutanga yekuvandudza yegore kune inozivikanwa Linux inoshanda sisitimu yakanangana nekupinda uye kubiridzira kwetsika kwegore.
Kali Linux 2019.1 inotanga kusimudzira kweiyi sisitimu inoshanda gore rino uye inozviita nenzira huru, ichiunza pamwe neyakakurumbira yekupinda yekuyedza yekushandisa Metasploit 5.0.
Metasploit 5.0 chiitiko chikuru chinounza akawanda maficha uye zvigadziriso kune yekupinda chishandiso, pakati pazvo patinogona kutaura nyowani yekutsvaga injini, nyowani dzekunzvenga ma module, akabatanidzwa ewebhu masevhisi, rutsigiro rwekunyora shellcode muC, pamwe neiyo daemon nyowani. -rpc.
Kali Linux ikozvino inotsigira ARM Banana Pi uye Banana Pro makadhi
Yechipiri shanduko huru muKali Linux 2019.1 ndiko kudzoka kweiyo tsigiro yeBanana Pi uye Banana Pro Sezvo ino system iine Linux Kernel 4.19 nerutsigiro rurefu. Pamusoro pezvo, iyo yekuisa mifananidzo yeRaspberry Pi yakareruka kuita kuti zvive nyore kusarudza kuti ndeipi yaunosarudza.
Zvakare, Kali Linux 2019.1 inosanganisira re4son's kalipi-tft-config script pane ese Raspberry Pi mifananidzo, saka hapana chikonzero cheiyo yakasarudzika ISO yevashandisi vane TFT LCD skrini, ivo vanongoda kumhanyisa iyo kalipi-tft- raira. mirairo pachiratidziri. Unogona tora Kali Linux 2019.1 kubva ku webhusaiti yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo yekutanga yekuvandudza yegore yeKali Linux iri pano
Sunflower iyo mbiri pane faira maneja yeLinux